အကောင်းဆုံး မြင့်မားသော Wattage Lights LED ထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊ ဖြန့်ချိသူနှင့် မြင့်မားသော Wattage Lights LED စက်ရုံကိုဘယ်လိုရွေးရမလဲ။
မြင့်မားသော Wattage Lights LED
ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းသည့်အချိန်တွင်မဆိုစျေးကွက်နှင့်ဖောက်သည်ဝယ်လိုအားတခုတခုအပေါ်မှာမျက်စိစောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်၎င်းကိုအတိုင်းငါတို့ဗျူဟာကိုပြောင်းလဲလျက်ရှိသည်။ ကျနော်တို့ထုတ်လုပ်သူ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းနှင့်တင်ပို့အရည်အသွေးအကောင်းဆုံး မြင့်မားသော Wattage Lights LED အပြင် prompt ကိုကျေနပ်န်ဆောင်မှုအတွက်စျေးကွက်နဲ့ဖောက်သည်များ၏ပတ်ဝန်းကျင်ကိုအညီ Taiwan , ဖောက်သည်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမာခံတန်ဖိုးဗဟိုပြုနှင့်ထုတ်ကုန်အရည်အသွေးပေါ်စျေးကွက်တွင်-oriented ရုပ်သော။
ပုံစံ - DBDL 38° 200-50W
အသုံးပြုမှုရည်ရွယ်ချက်:ထိုကဲ့သို့သောစက်ရုံများအဖြစ်ပိုမိုမြင့်မားအခါသမယများအတွက်သင့်လျော်သော,သိုလှောင်ရုံ,ဆိပ်ကမ်းများ,အားကစားကွင်း/cabinies နှင့်ပြင်ပလမ်းလမ်းဆုံ illumination
ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဝေးလံသောအလင်းရောင် optics နှင့်အတူပေါင်းစည်းအထုပ် COB အလင်းအရင်းအမြစ်(မှန်ဘီလူး:၁၀/15/၅၆ ဒီဂရီ).
အပူလွန်ကဲခြင်းနှင့်အလွန်အကျွံ overcurrent ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဒီဇိုင်း.
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.ledlightfixtures.org/my/high-wattage-led-lights.html
အကောင်းဆုံး မြင့်မားသော Wattage Lights LED ကိုရှာဖွေပြီးစျေးဝယ်ရန်အတွက် Taiwan မှစက်ရုံတစ်ခုမှထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားဖြန့်ချိသူ၊ ဖြန့်ချိသူ၊ OEM နှင့် ODM တို့၏အမြင့်ဆုံးအရည်အသွေးကိုသိရန်လိုအပ်သည်။